नेपाली सुन्दरीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा माथिल्लो स्थानमा आउन नसक्नुका कारण के हुन्? | Rajmarga
थाइल्याण्डको बैंककमा भएको मिस युनिभर्समा मनिताले अन्तिम १० सम्मको स्थान सुरक्षित बनाउन सकिन् भने केही समयअघि चीनको सान्यामा भएको मिस वर्ल्डमा शृङ्खला अन्तिम १२ मा पुग्न सकेकी थिइन्। उनीहरू दुवैको प्रदर्शनलाई विगतका वर्षमा नेपालले गर्ने प्रदर्शनभन्दा राम्रो मान्नुपर्ने पूर्व मिस नेपालहरूले बताएका छन्।
सन् २०१० की मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठ भन्छिन्, “नेपालको अहिलेको संघर्ष भनेको टप फाइभ वा टप थ्रीसम्म पुग्ने हो। त्यहाँ पुगेर सुन्दरी छनोटका लागि सोधिने अन्तिम प्रश्नको सामना गर्न पाए भने मात्रै नेपालले उपाधि ल्याउन सक्छन्।”
उनको भनाइमा नेपालीहरू बोल्न सक्छन् तर सुरुका चरण पार गर्न आवश्यक प्रदर्शनहरूमा पछि पर्छन्। त्यसको एक मुख्य कारण सदीक्षाको बुझाइमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम पाउन नसक्नु पनि हो।
उनको भनाइमा मत मिलाउँदै पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बा भन्छिन्, “पहिला पहिला भन्दा यो वर्ष नेपालको प्रदर्शन राम्रो भयो। एउटा कारण यो वर्ष पहिलोपटक नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेनरहरू ल्याउनु पनि थियो। त्यस्ता थुप्रै तालिम नेपालका सुन्दरीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जानुअघि पाउन आवश्यक छ।”
‘पृष्ठभूमि बलियो हुनुपर्यो’
“जुन वर्ष मिस नेपालमा भाग लियो त्यही वर्षमात्रै सामाजिक कार्य गर्ने जस्तो गरेर पर्याप्त हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जाने सुन्दरीहरू स्वयंको पृष्ठभूमि पनि बलियो हुन आवश्यक छ। र, उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि पाउन आवश्यक छ।”
“सन् २०१० मा मैले विश्व सुन्दरीमा भाग लिन जाँदा पूरा १ महिना पनि तालिम गर्न पाएको थिइनँ, त्यो भन्दा अगाडिका दिदीहरूले त तालिमको कुरै छोडौं लुगा पनि पहिलाको मिस नेपालहरूको लैजाने गर्नुभएको थियो,” सदीक्षाले बीबीसीसँग भनिन्, “अहिले त कम्तीमा मिस नेपाल वा मिस युनिभर्समा जाने प्रतिस्पर्धीको त्यस्तो अवस्था छैन।”
Previous post: दिल्लीमा एक छात्राको बलात्कार भएको ६ वर्ष पुगेकै दिन अर्की बालिका बालात्कृत
Next post: १ महिनामा कतिपटक चरम आनन्द ? अध्ययन यसो भन्छ